Sekuphele iminyaka ehlala endlini ewayo | News24
Sekuphele iminyaka ehlala endlini ewayo
Indlu ehlala uSphamandla Mkhize.ISITHOMBE: lethiwe makhanya
SEKUVUKE ukukhathazeka ngesimo sendlu sowesilisa wasendaweni yaseSweetwaters esekuvele ukuthi sekuphele iminyaka ehlala endlini yodaka ewayo njalo uma kuke kwaba khona izimvula ezinkulu okanye umoya omkhulu. uSphamandla Mkhize (25) waKwaZayeka kuthiwa sekuphele isikhathi ehlala endlini yakubo yodaka engawa noma inini uma ngahle kufika izimvula ezinkulu.
Ngokusho kukamakoti wakubo uNkk Nonkululeko Mndaweni uthe lendlu eseyisele namagumbi amabili kuphela yayinamagumbi amahlanu kodwa manje isinamagumbi amabili kuphela. “uSphamandla akasenabani usesele yedwa nje kanti futhi usebenza imisebenzi eyamatoho akakwazi ukuthi angakwazi ukuthi aqale phansi akhe umuzi. Njalo uma ngabe like lanetha kakhulu ebusuku sinomsebenzi wokuthi kumele sivuke sikhathazeke siyobheka ukuthi kungabe indlu ayikakawi yini.
“Indlela lendlu eseyiyiyona uma ngabe kungafika izimvula ezinkulu ingawa yonke phansi nalapho kuyobe sekusho ukuthi uSphamandla uphelelwe indawo yokuhlala,” kubeka yena.
Uqhube wathi enye into ebakhathaza kakhulu ukuthi uma ngahle kwenzeke ukuthi lendlu igcine iwe yonke kuzobe sekusho ukuthi kuphelile ngendaba kaSphamandla.
Uqhube wathi uSphamandla wake wazama ukubhalisela indlu yomxhaso ngonyaka wezi-2014. Uthe wathi uma ngabe eseyobheka ukuthi kungabe kwenzakalani wafike watshelwa ukuthi isitifiketi sengane asihambisa sikhomba ukuthi sesake sasebenza ngaphambilini ngesikhathi kucelwa indlu yomxhaso. “Isitifiketi asisebenzisa esengane yami ngoba akanaye omunye umuntu.
Into esiyifunayo nje ukuthi athole indlu yomxhaso.”
Okhulumela uMnyango wezokuHlaliswa kwabantu uMnu Mbulelo Baloyi ukuqinisekisile ukuthi uSphamandla wafaka isicelo sendlu yomxhaso kodwa sangaphumelela ngenxa yokuthi kwakungalandelwanga indlela efanele. “Kumele aye kwi-war room ye-Operation Sukuma Sakhe ewadini lapho ehlala khona acele ukungenelela kwekhansela elizosho ukuthi abhekelelwe. Udaba lwakhe lukufanele loku ngoba uyena ingane eyinhloko yekhaya.”
Edgemead 09:11 AM